Browser Speed Tests | Mozilla Myanmar
Cold Boot-Up, Tab Loading & DOM/CSS Performance Winner: Opera!
website တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ ဘရောက်ဇာတွေထဲမှာ Opera က ဦးဆောင်နေပါတယ်။ Lifehacker, facebook, hulu, gamil အစရှိတဲ့ website တွေကို tab ၉ ခုနဲ့ဖွင့်ပြီးစမ်းသပ်ရာမှာ loading မြန်ဆန်မှုမှာလည်း opera က အသာရပါတယ်။ Firefox နဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာ တော်တော်လေးမြန်ပေမယ့် ဒုတိယနေရာကိုဘဲ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ IE က တတိယနေရာမှာ ရှိပြီး chrome ကတော့ အခုစမ်းသပ်မှုမှာ နှေးကွေးနေပါတယ်။ CSS performance မှာလည်း Opera ဘဲဦးဆာင်နေပါတယ်။
Website လိပ်စာ တွေကို ဘရောက်ဇာရဲ့ address bar ကနေ တဆင့် ရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာ Chrome က အသာရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ prerendering feature ကြောင့် လည်း အခုလိုမြန်ဆန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုစမ်းသပ်မှုမှာတော့ Firefox က ဒုတိယလိုက်နေပြီး၊ IE က တတိယ၊ Opera က စတုတ္ထ ဖြစ်သွားပါတယ်။
Firefox ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ on demand tab loading လုပ်ဆောင်ချက်က Firefox ရဲ့အမြန်နှုန်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။ Tab ကိုးခုဖွင့်ထားတယ်၊ session တစ်ခုမှာ သိမ်းလိုက်တယ်၊ ဘရောက်ဇာကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ section ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ tab တွေကို auto restore ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။ restore လုပ်တဲ့အခါ တခြား ဘရောက်ဇာတွေက tab ကိုးခုလုံးကို loading ဆွဲနေတဲ့အတွက် အမြန်နှုန်း သိသိသာသာကျသွားချိန်မှာ Firefox က active ဖြစ်နေတဲ့ tab တစ်ခုကို ဘဲ loading ဆွဲတဲ့အတွက် မြန်ဆန်သွားပါတယ်။ တခြား tab တွေကို click နှိပ်မှသာ loading တဲ့အတွက် ဘရောက်ဇာ စတက်တက်ခြင်းမှာ မြန်ဆန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Memory Usage Winner: Firefox!
Firefox ဟာ တခြား ဘရောက်ဇာတွေနဲ့ယှဉ်ရင် မန်မိုရီ အသုံးပြုမှုနှုန်း အရမ်းနည်းပါတယ်။ tab ကိုးခုလောက်ဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်ရာမှာ တခြား ဘရောက်ဇာတွေက မန်မိုရီ 400 MB လောက် အသုံးပြုနေချိန်မှာ firefox က 310 MB ဝန်းကျင်လောက်သာ အသုံးပြုပါတယ်။ tab ကိုးခုအပြင် extension ငါးခုလောက်အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်ချိန်မှာ တခြား ဘရောက်ဇာတွေက မန်မိုရီ 200 MB လောက်ထိုးတက်သွားချိန်မှာFirefox က 60 MB ဝန်းကျင်လောက်သာ အသုံးပြုပါတယ်။
အထက်ပါ အချက်အလက်အားလုံးကို အချိုးကျတွက်ချက်ရာမှာ
Firefox က 75% နဲ့ ဘရောက်ဇာ အမြန်နှုန်းမှာ အသာရရှိပါတယ်။
Chrome နဲ့ Opera က 66% နဲ့
Internet Explorer: 45% အသီးသီးရရှိပါတယ်။
Firefox ရဲ့ new tab on demand လုပ်ဆောင်ချက်က ပထမနေရာ ရောက်ရှိသွားစေတဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ opera နဲ့ chrome က အမြန်နှုန်းမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပေမယ့် Internet Explorer ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းနှေးမြဲ နှေးလျက်ပါဘဲ။
tinaunglinn wrote on August 6th, 2012 at 4:32 pm :
ဖိုင်းယားဖောက်စ် ဟဲန်းဟဲန်းသွားတယ်ဆိုတာက ဆော့ဝဲတစ်ချို့အသုံးမလိုပဲ အတ်အွန်တွေ ဝင်ဝင်လာလို့ပါ ။ဥပမာ Ask.com toolbar လိုဟာမျိုး။ အဲ့ဒါတွေရှင်းထုတ်ပြီး သုံးလောက်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဆိုတော်တော် မြန်တာပါ။ ဆော့ဝဲ ဝတ်ဆိုဒ် အက်ပလီကေးရှင်းတော်တော်များများက သူတို့ကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဖိုင်းယားဖောက်စ် လူတိုင်းသုံးမှန်းသိလို့ပလပ်အင် တွေပါ တစ်ခါထဲထည့်ရေးထားတတ်ကြပါတယ်။ ဖြုတ်သုံးပေါ့ပါတယ်ဗျာ။
More from Wai